Jiirka kumbiyuutar ha kuu subxaanalleeyo. - Hoyga Aqoonta
Hoyga Aqoonta > Aqalka Kumbiyuutarka % Internet-ka > Kumbiyuutarka & Internet-ka
Jiirka kumbiyuutar ha kuu subxaanalleeyo.
Kumbiyuutarka & Internet-ka Waxaa ku jira wixii ku saabsan kumbiyuutaka iyo internet-ka wixii looga shaqayn lahaa..
Nambarka Xubinka : 858
Taariikhduu xubinku is qoray golaha: Dec 2011
Wadanka : barnaamij.com
ka qayb galka: 127
Isku cel-celinta qiimaynta heereed : 10
Waxaa la qoray : [ 24-04-2012 ]
Asxaabeey marba waxbaan soo helaaye kan iga hanta.
Jiirka kumbiyuutar wuxuu noqonayaa mid ay ku qorantahay ama wata subxaanalaysi.
Macnuhu waa intaad kumbiyuutarka ku shaqaynaysid haddaad rabto inaadan illoobin dikriga
Jiirka kumbiyutarka ayaa kuu xusuusanaya ee tallaabooyinkan samee..oo ila eeg siduu kuu noqdo. Falykani waa fayl runtii yar oo mucjiso ah.
Marka hore halkan ka deji faylkan yar adiga oo riixaya.
Ama halkan kala dag
ku deji meel aad taqaanno.(Badanaa wuxuu ku dagayaa DOWNLOADS)
Looxa Maaraynta//AMA// Control Panel.
Jiirka ///AAM//// Mouse
Tilmaame ////AMA//// Pointer
Raadshe ////AMA/// Browse
Hadda ka raadi meeshaad ku dejisay faylka oo labo goor soo riix.
Aqbal ///AMA/// Apply
Ila eeg marka Jiirku siduu isu beddelay sow ilaahay mar walba kuma xasuusinayo.
OK riix oo ka bax Jiir casri ahna waad haysataa hadda sow maaha.
Mowduucii hore : Jiirka kumbiyuutar ha kuu subxaanalleeyo. -||- Ka soo jeeda: -||- Qoraaga: Yaasiin
Saxiixa : Yaasiin
dhakhso loo ogaadaa
sidiisi ka dhigantoo
Isku toosintii ugu danbaysay waxaa sameeyey Halyeyga Afrika ; 30-12-2013 saacaddu 04:47 PM
Warqad gaara u dir Yaasiin
Raadi qoraalladuu qoray/qortay Yaasiin
ka qayb galka : 439
Jawaabta: Jiirka kumbiyuutar ha kuu subxaanalleeyo.
Aniga runtii waan tijaabiyey waanan ka helay, waanan kaaga mahad celinayaa ajarkeedana xusuusintaan allaha kaa abaal mariyo.Mahadsanid Yaasiin.
Saxiixa : Halyeyga Afrika
Aqoon la'aani waa iftiin la'aane
Ogaada Ogaada walaalayaal Ogaada.
ALLAHA U NAXARIISTO INTA CILMIGA CISEYSA
Yaasiin waan kaaga mahad celinayaa faylkan la yaabka leh ee aad soo bandhigtay.
Saxiixa : Rooble
Rasuulku calayhi salaatu wasalaam
"Sadaqada ugu fiicani waa inuu muslimku wax barto,markaana walaalkiisa muslinka ah baro"
Maylku tallaabuu ka bilowdaa (Maahmaah shiinays ah)
Kalgacaylka aad dalkaaga u haysaa, waa iimaanka ka bar.
Kaqayb Galka : ( 4 )
Nambarka Xubinka : 30
Taariikhduu xubinku is qoray golaha : Apr 2011
ka qayb galka : 266
Yaasiin mahadsanid ee haddana waxaan la yaabaa 30 qof ayaa booqatay qoraalkan wax qiimeeyeyna ma jiraan. Taasaad igu ogtahay waa qoraal heer sare ah darajada ugu fiicanna waan ku siiyaye dadaalkaas wad saaxiib.Mahadsanid.
Warqad gaara u dir xuseen
Raadi qoraalladuu qoray/qortay xuseen
Kaqayb Galka : ( 5 )
Maashaa'allaah Yaasiin horumar baan kuu rajaynayaa.Mahadsanidna
Kaqayb Galka : ( 6 )
Nambarka Xubinka : 201
ka qayb galka : 165
Isku cel-celinta qiimaynta heereed : 13
Waxaa la qoray : [ 26-04-2012 ]
Warqad gaara u dir faysal22
Raadi qoraalladuu qoray/qortay faysal22
Kaqayb Galka : ( 7 )
Nambarka Xubinka : 186
ka qayb galka : 166
Waxaa la qoray : [ 27-04-2012 ]
Warqad gaara u dir Guuleed
Raadi qoraalladuu qoray/qortay Guuleed
Kaqayb Galka : ( 8 )
Nambarka Xubinka : 191
ka qayb galka : 113
Saxiixa : waasuge
Waa sugaan ahaye maxaa cilmi cusub ah.
Warqad gaara u dir waasuge
Raadi qoraalladuu qoray/qortay waasuge
Kaqayb Galka : ( 9 )
Nambarka Xubinka : 9
Wadanka : Lagama maarmaanku waa dalka Hooyo
ka qayb galka : 160
Waxaa la qoray : [ 29-04-2012 ]
Yaasiin khayr allaha kaa siiyo runtii waad ii faa'iidaysay.mahadsanid.
Warqad gaara u dir samiira
Raadi qoraalladuu qoray/qortay samiira
Kaqayb Galka : ( 10 )
Nambarka Xubinka : 876
Taariikhduu xubinku is qoray golaha : Apr 2012
Wadanka : norway
ka qayb galka : 1
Waxaa la qoray : [ 18-05-2012 ]
asc masha allh walashey yasmin aadoo weyn ayaad u mahadsantahay runtii waa barnaamij aan layaabay aadne iisoo jiitay wana kahelay masha allh ilaahy hakugu guuleyo howshan wanagsan ee aad inoosoo bandhigtay waxana kuleyahay hor usocod wanagsan!!!!!
Warqad gaara u dir wadani
Raadi qoraalladuu qoray/qortay wadani
ahna, asxaabeey, badanaa, casri, dejisay, hanta, helaaye, iga, jiirka, kan, looxa, maaraynta, marba, raadshe, riixaya, shaqaynaysid, subxaanallaah, subxaanalleeyo, tilmaame, waxbaan, xusuusanaya
Barnaamij bilaashoo kuu nadiifin kumbiyuutarka Afrikaan Golaha Barnaamijyada 5 17-04-2015 04:46 PM
Barnaamij kuu jarjaraya maqaloo dhan Halyeyga Afrika Golaha Barnaamijyada 4 12-02-2014 05:18 PM
Kumbiyuutar kaada Sacdiisa kabadal PM AM Maxammed Xamza Kumbiyuutarka & Internet-ka 9 13-04-2012 02:14 PM
Ka warran haddaad weydo mouse (Jiirka) ama kaa xumaado? Rooble Kumbiyuutarka & Internet-ka 2 04-08-2011 11:27 PM
Yaa samiic ilaahoow adaan kuu sacabbo dhogan abwn: cabdi rabbi caaqil Gabayada 8 24-07-2011 06:31 PM
Saacaddu hadda waa 10:16 PM.